Milling – Peace Brothers Industry
သင်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း TopWhite ကိုညှိနိုင်သည်။ ကြမ်းတမ်းသောချိန်ညှိမှုများအတွက်မူကားနှင့်ဘရိတ်အကြားကွာဟချက်ကိုပြောင်းလဲရန်လက်ကိုင်ဘီးကိုဖွင့်ပါ။ အသေးစိတ်ချိန်ညှိချက်များအတွက်သင်ထိန်းထားသည့်ဂိတ်၏ဟန်ချက်ညီသောအလေးချိန်ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ ဤသည်တသမတ်တည်းနှင့်မြင့်မားသောထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီပေးသည်။
TopWhite သည်ပွန်းပဲ့ခြင်းပွန်းပဲ့ခြင်းနိယာမတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ဤသည်မြင့်မားအထွက်နှုန်းထုတ်လုပ်ကူညီပေးသည်။ စက်၏ထိပ်ရှိအ ၀ င်နှစ်ချောင်းမှတဆင့်ဆန်သည်အဖြူရောင်ဖြူထဲသို့ဝင်သည်။ ထို့နောက်သန့်စင်ခန်းတွင်းသို့ feed screw တစ်ခုဖြင့်ကျွေးမွေးသည်။ ၎င်းတွင်ပွန်းပဲ့သောကွင်းခြောက်ခုနှင့်မျက်နှာပြင်အကြားဖြူပြီးဖွဲဖွဲများကိုဖယ်ရှားသည်။
Horizontal Rice Whitener is one of the most commonly utilized machines for rice whitening owing to its excellent processing efficiency & production speed. It is equipped with superior quality abrasive rollers having air holes & spiral grooves for rice cooling. This machine effectively removes bran layer from rice with minimum chances of kernel breakage. It adopts excellent aspiration system which maintains optimum sanitation. Horizontal Rice Whitener is completely automatic in nature and has sturdy construction with ventilated body for proper heat dissipation.
output: 2000 ~ 3000 ကီလိုဂရမ် / h ပါဝါ: 18.5 + 1.5, 22 + 1.5kw;
လေထုပမာဏ – 1400 ~ 2000 m3 / h; လေတိုက်နှုန်း: 1500 ~ 2000 Pa;
အရွယ်အစား: 1874 × 620 × 1947 မီလီမီတာ;
မူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောနည်းပညာနှစ်ခု၊ လေကောင်းလေမှုတ်ခြင်းနှင့်တံခါးပိတ်တံခါးပိတ်တံခါးပိတ်လေလေနည်းပညာတို့ဖြင့်ဒီဇိုင်း လုပ်၍ ထုတ်လုပ်သည်။ ဖြူကြိတ်ခွဲခန်းထဲသို့ ၀ င်ရောက်သောလေထုသည်ဆန်၏အပူချိန်မြင့်တက်မှုကိုထိရောက်စွာနှိမ်နင်းနိုင်သည်။ စွမ်းအင်ပြည့် ၀ သောဆန်ကိုရရှိရန်စုပ်ယူနိုင်သောကိရိယာ၊ ဆန်စပါးအပူချိန်နိမ့်ခြင်း၊ ဖွဲနုနည်းခြင်းနှင့်ကြိတ်ခွဲခြင်းတိုးမြှင့်ခြင်း၊ သံလိုက်ခွဲခြင်းကိရိယာနှစ်ခုပါသောဂိတ်တံခါး၊ အဆင်ပြေသောလည်ပတ်မှု၊ built-in မော်တာ၊ လှပသောအသွင်အပြင်၊ အဆင်ပြေသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသည် CFN18B မျိုးဆက်သစ်ဆန်စက်များ။
၁။ အဖြူရောင်ခန်းအတွင်းယူနီဖောင်းများလေ ၀ င်လေထွက်တိုးစေရန်အတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏လေအေးပေးစက်စနစ်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပြီးဖွဲနုရေနုတ်မြောင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
—– National 2005 စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာအောင်မြင်မှုမြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း။
TQN 128 Features
Large yield, the rice is white and bright
Less chaff, low temperature of rice , low broken rate
Has better effect to parboiled rice and boiled rice